Translate but they need to take care in Burmese
Results for but they need to take care translation from English to Burmese
ယေရှုက၊ သွားရသောအကြောင်းမရှိ။ သူတို့စားစရာဘို့ သင်တို့ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သိမ်းဆည်းဖို့ အပြောင်းအလဲများ လုပ်စရာ မလိုအပ်ဘူး
but we need to treat every chest pain with the utmost seriousness
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ရင်ဘတ်အောင့်တာမျိုးကို မဆို ဂရုတစိုက် ကုသပေးဖို့ လိုပါတယ်
The steps to take in passing the exam
But if one does not cooperate with the soldiers, they say that they will use “harsh medicine” to take care of things.
တစ်​ယောက်⁠ယောက်​က သဘောတူ​ပါဝင်​မယ်​ဆို​ရင် အဲ​တစ်​ယောက်​က ပြန်​လို့​ရ​မယ်။
To install software, you need to authenticate.
To install this package, you need to authenticate.
ဒီ package ကိုသွင်းရန် ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
အလုပ်လုပ်သောသူတို့အားသာ ပေး၍၊ ဗိမာန်တော်ကို ပြုပြင်ကြ၏။
ထိုအခါ ကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးခြင်းငှါ တဖန် ရှာကြပြန်လျှင်၊ ထိုသူတို့၏လက်မှ ထွက်ကြွတော်မူ၏။
သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကို ဖုံးအုပ်စဉ်အခါ ကောဟိတ် သားတို့သည် သေဘေးနှင့် လွတ်မည်အကြောင်း၊ အထဲ သို့ဝင်၍ မကြည့်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။
I think we should tell western countries that if they need this kind of people and want to protect them, they should take them.
ဒီ​လို​လူ​တွေ​ကို သိပ်​လိုချင်​ပြီး ကာ​ကွယ်​ပေး​နေ​ချင်​ရင် အဲ​ဟာ​တွေ​ကို ခေါ်​သွား​လို့ အနောက်​နိုင်ငံ​တွေ​ကို ပြော​ပစ်လိုက်​သင့်​တယ်။
To install purchased software, you need to authenticate.
software settings ပြောင်းရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
To install updated software, you need to authenticate.
ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ကိုသိသော်လည်း၊ သူတို့သည် ယောသပ်ကို မသိကြ။
All files need to be analysed to complete this operation.
To install or remove software, you need to authenticate.
ဆော့ဝဲလ်များ သွင်းရန်ဖြုတ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။org.debian.apt.install-or-remove-packages
upuan (English>Tagalog)what we call vada gulla in english (English>Telugu)replace (English>Hungarian)yo tambien te echo de menos (Spanish>Tagalog)upang makasabay sa modern technology (Tagalog>English)l'amour est tout ce qu il faut (French>English)iudicium (Latin>Italian)pamagat sa ilocano (English>Tagalog)sentence patterns (English>Tamil)mas nalalamangan (Tagalog>English)permasalahan kajian (Malay>English)vocabulario de la lengua bisaya meaning (Spanish>Tagalog)mincio (English>French)marami ka nga naitulong saakin (Tagalog>English)suerte y cuidate (Spanish>English)don't be naive (English>Tagalog)bhai ki ladki ko english me kya kehete hai (Hindi>English)dimag mat kha (Hindi>English)pareho ang pipiliin ko para patas (Tagalog>English)muri et fossa oppidum cingunt (Latin>Russian)最外周 (Japanese>English)radovati (Serbian>Esperanto)arbeitsplattensegmente (German>English)mga salitang badjao halimbawa (English>Tagalog)eu hangen (Welsh>English)